Nnwom 78 NA-TWI - Onyankopɔn ne ne nkurɔfo - Me - Bible Gateway
Nnwom 77Nnwom 79
Nnwom 78 Nkwa Asem (NA-TWI)
78 Me nkurɔfo, muntie me nkyerɛkyerɛ na monyɛ aso mma asɛm a meka no. 2 Mede abebu rebɛkyerɛ mo anwonwade a esii tete no mu; 3 nneɛma a yɛate na yɛahu; nneɛma a yɛn agyanom kaa ho asɛm kyerɛɛ yɛn. 4 Yɛremfa nkame yɛn mma; yɛbɛka Awurade tumideyɛ ne anwonwade a wayɛ akyerɛ nkyirimma. 5 Ɔmaa Israelfo mmara na ɔde ahyɛde nso maa Yakob asefo. Ɔka kyerɛɛ yɛn agyanom se wɔnkyerɛkyerɛ wɔn mma ne mmara no, 6 sɛnea ɛbɛyɛ a nkyirimma besua na wɔn nso akyerɛkyerɛ wɔn mma. 7 Ɛba saa a, wɔn nso de wɔn ho bɛto Onyankopɔn so, na ɛremma wɔn werɛ mfi nea wayɛ, na daa wobedi ne mmara no so. 8 Wɔrenyɛ sɛ wɔn nenanom adɔnyɛfo ne asoɔdenfo a wɔn gyidi a na wɔwɔ wɔ Onyankopɔn mu no antim da, nanso wɔantena ase sɛ nokwafo amma no.